Qoraal ka soo baxay Agaasimaheena Fulinta ee Weerarkii Trump ee Dhalashada Dhalashada - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Press Release > Bayaan ka soo baxay Agaasimaheena Fulinta ee Weerarkii Trump ee Dhalashada Dhalashada
Bayaan ka soo baxay Agaasimaheena Fulinta ee Weerarkii Trump ee Dhalashada Dhalashada
(Denver, CO) - Nicole Melaku, Agaasimaha Fulinta ee Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC) wuxuu soo saaray bayaankan soo socda ee ku saabsan isku dayga Madaxweyne Trump iyo Senator Lindsey Graham ee ah inay si aan dastuuri ahayn u joojiyaan dhalashada dhalashada, oo ku qoran wax ka beddelka 14aad ee Dastuurka Mareykanka, iyada oo loo marayo fulinta amar ama sharci ahaan:
“Saaka Madaxweyne Trump iyo Senatorka South Carolina Lindsey Graham waxay ku dhawaaqeen amar fulin iyo soo jeedin sharci ah oo lagu joojinayo dhalashada dhalashada. Dib-u-dirista rabshadaha leh ayaa ah isku day kale oo cad oo lagu ciyaarayo siyaasad laguna xoojinayo nacaybka kahor doorashooyinka xilliga dhexe iyadoo si khaldan loo adeegsanayo awoodda dowladda. Si la mid ah soo dejintii madaxweyne Trump ee ciidamadeena canshuur bixiyaha ee xuduuda koonfureed (in kasta oo kooxda magangalyo doonka ay todobaadyo ka maqnaayeen), tani waxay muujineysaa in dawladaha Trump ay quus ka taagan yihiin inay shidaal ka helaan nacaybka aan hore iyo xudunta u ahayn qarankeena hadal siyaasadeed.
Trump wuu ogyahay, Senator Graham wuu ogyahay, kulligeenna waan ognahay in wax ka beddelka dastuurka aan dib loogu noqon karin amar fulineed ama sharci fudud. Astaamaha madaxweyne Trump ee Mareykanka inuu yahay dalka kaliya ee ku dhaqma dhalashada dhalashada maahan kaliya mid qaldan, laakiin waa been abuur geesinimo leh oo ka weecanaya mabaadi'da aasaasiga ee qarankeena.
Ku kalsoonow in Nofeembar 6th, dadka Mareykanku ay ku arki doonaan isdaba marintaan iyo isku dayga quusta ah ee lagu guuleysto doorashada iyadoo la adeegsanayo xeelado cabsi ku saleysan. Doorashada xilliga dhexe ayaa afti u noqon doonta nacaybka, cunsuriyadda, iyo ajnabi nacaybka iyada oo codbixiyayaashu ay la xisaabtami doonaan dhammaan siyaasiyiinta, heer qaran ama maxalli ahaan.
Waan ka fiicanahay tan iminkana waxaa la joogaa waqtigii aan difaaci lahayn himilooyinkeenna ugu sarreeya annagoo hal dal ah oo leh hal cod oo aan ku fulinno ballanqaadkii dimuqraadiyadda xoogga leh ee aan ku diidi karno rabshad la'aan, iyada oo aan loo hanjabin kuwa ugu nugul ee dhexdeena ah taas beddelkeedana aan soo dhaweyno Muwaadiniinteenna ugubka ah ee gacan ka geysan doona fulinta ballanqaadka qarankan weyn.
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC) waa dowlad-goboleed guud, isbahaysi xubin-ku-saleysan oo muhaajiriin, caqiido, shaqo, dhalinyaro, jaaliyad, ganacsi iyo ururo isbahaysi ah oo la aasaasay 2002 si loo wanaajiyo nolosha muhaajiriinta iyo qaxootiga iyagoo ka dhigaya Colorado soo dhaweyn badan, gobolka soo-galootiga-saaxiibtinimo. CIRC waxay ku guuleysaneysaa himiladan iyada oo loo marayo kaqeybgalka bulshada ee aan xisbiyada ahayn, waxbarashada dadweynaha, iyo u doodista siyaasadaha socdaalka ee shaqeynaya, caddaaladda iyo aadanaha.
Wax dheeri ah ka baro coloradoimmigrant.org ama Twitterka @CIRCimmigrant